घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू बेन Godfrey बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
हाम्रो बेन Godfrey जीवनी उनको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, आमा बुबा, प्रेमिका / पत्नी हुन जीवन शैली, व्यक्तिगत जीवन र नेट वर्थ को बारे मा तथ्यहरु चित्रण।
सामान्य शब्दहरूमा, हामी तपाईंलाई उसको जीवन यात्रा प्रस्तुत गर्दछौं, शुरुको दिनदेखि, जबसम्म उहाँ खेलमा प्रख्यात हुनुभयो। तपाइँको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, वयस्क ग्यालरीमा फुटबलरको बाल्यकाल यहाँ छ - बेन गोडफ्रेको बायोको एक सारांश।
अंग्रेजी फुटबलर बेन गोडफ्रेको जीवनी। उनको प्रारम्भिक जीवन र उदय कथा हेर्नुहोस्।
लगभग सबैलाई २०२० स्थानान्तरणमा एभर्टनको साथ २£ मिलियन डलरको उसको ठेक्का थाहा छ क्यानरीहरूको इतिहासमा सब भन्दा ठूलो सम्झौता हो। यस प्रशंसकको बाबजुद, केहि फुटबल प्रशंसकहरूलाई गोडफ्रेको जीवन कहानी थाहा छ जुन धेरै रोचक छ। धेरै विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
बेन Godfrey बचपन कहानी:
जीवनी शुरुवात गर्नेहरूको लागि, उहाँ बेन्जामिन म्याथ्यू गोडफ्रेको वास्तविक नाम बोक्नुहुन्छ। बेन केवल एक उपनाम हो। अ foot्ग्रेजी फुटबलर जनवरी १ 15 1998 January को जनवरी १ his तारिखमा उनका आमा बुबा, श्रीमती र श्रीमती एलेक्स गोडफ्रेको जन्म इ York्गल्याण्डको नर्थ योर्कशायरको योर्क शहरमा भएको थियो। बेन Godfrey यहाँ चित्रण छन् जो आफ्नो आमा र बुबा को मात्र बच्चा देखिन्छ।
दुबै बुबाआमा प्रायजसो समय खेल्छन्। के तपाई बेन र एलेक्स गोडफ्रे, उसको बुवा बीचको घनिष्ठ समानता देख्न सक्नुहुन्छ?
स्पष्ट रूपमा, उदाउँदो केन्द्र-ब्याकले आफ्नो बाल्यावस्थाका दिनहरू मूर्ति बनाएर व्यतीत गर्‍यो थियरिरी हेनरी। हो! ऊ सानो छँदादेखि उसलाई फुटबल खेल्नमा गहन रुचि छ। उनका एथलेटिक बुबाको समर्थनका लागि, फुटबलमा बेनको आनन्द केवल शौकको रूपमा कहिले समाप्त भएन।
बेन Godfrey परिवार पृष्ठभूमि:
खेलकुद परिवारबाट आएका, यो स्वाभाविकै हो कि उसका खेल मायालु आमाबाबुले उहाँमा सुन्दर खेलको लागि प्रेम जगाएका थिए। गोडफ्रेको पारिवारिक आनुवंशिकीमा एथलेटिक्स धेरै गहिरो रूपमा चल्दछ भनेर तपाईंलाई थाहा थिएन होला।
वास्तवमा, उनको बुबा, अलेक्स गोडफ्रे पूर्व पेशेवर रग्बी लीग खेलाडी थिए। आफ्नो क्यारियर को समयमा आफ्नो ठूलो कमाई संग, ठूलो मान्छे कि सानो बेन, उसकी पत्नी र विस्तारित घर एक आरामदायी जीवन शैली को आनन्द उठाउनुभयो।
बेन Godfrey परिवार उत्पत्ति:
मिश्रित रेस जातीयताको अंग्रेजी राष्ट्रियता इ England्ल्यान्डको सब भन्दा ठूलो गैर-महानगरीय काउन्टी (उत्तर यार्कशायर) बाट आउँदछ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, गोडफ्रेको गृहनगर लन्डनबाट करीव 328.1२XNUMX.१ किलोमिटर टाढा छ, जहाँ इ England्ल्यान्डको सबैभन्दा सम्मानित आइकन (डेविड बेखम) जन्मेको।
बेन गोडफ्रे परिवार यहीँ हो। ऊ जहिले पनि आफ्नो इतिहास सुरु भएको ठाउँमा दिमागमा रहन्छ।
के तपाईंलाई थाहा छ?… उसको उत्पत्ति स्थान पर्यटनको लागि रमाइलो ठाउँ हो। वास्तवमा, उत्तर योर्कशायर योर्कशायर डेले र उत्तर योर्क मर्सहरूको लागि परिचित छ, जुन इ England्गल्यान्डको सर्वश्रेष्ठ गन्तव्यहरू मध्ये एक हो।
बेन गोडफ्रे फुटबल क्यारियर कसरी सुरु भयो:
यार्कशायरमा हुर्केका, भविष्यका ट्याकलर स्कूल पछि आफ्ना साथीहरूसँग फुटबल खेल्न रमाउँथे। त्यतिखेर, गोडफ्रे १२ वर्ष नपुगुञ्जेल स्ट्राइकरको रूपमा खेल्थे। धन्यबाद, उनले महसुस गरे कि उनी आक्रमणकारी भूमिकाका लागि बाहिरिएका थिएनन्। यसैले, उसले पछाडिबाट प्रभाव पार्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्‍यो।
किशोरावस्थामा विकसित हुँदा गोडफ्रेले आर्चबिशप होल्गेट स्कूलमा भाग लिए, जुन शैक्षिक स्तरको सह-शैक्षिक चर्च हो। त्यहाँ उनले हाई स्कूल फुटबलमा भाग लिए र धेरै प्रायोजकहरू र कोचहरूबाट मान्यता प्राप्त गरे। आफ्नो निर्विवाद प्रतिभा संग, Godfrey २०११ अंग्रेजी स्कूल 'एफए इंटर एसोसिएशन ट्राफी' को विजेता मा योर्क र जिल्ला U-13 टीम कप्तान।
बेन गोडफ्रे शिक्षा र क्यारियर निर्माण - जवानले आफ्ना साथीहरूलाई पहिलो ट्रफी जित्न मद्दत गरे।
बेन Godfrey क्यारियर फुटबल संग प्रारम्भिक जीवन:
खेलमा प्रवीणताको ठूलो सम्झौता प्रदर्शन गरिसके पछि, धेरै स्काउट्स आफ्ना आमा-बुबाको साथ उसको भविष्यको बारेमा छलफल गर्न बाहिर निस्के। धन्यबाद, एलेक्स गोडफ्रे र उनकी श्रीमतीले योर्क शहर एफसीको साथ उचित सम्झौता गरे। तसर्थ, उनीहरूले २०११ मा उनीहरूको छोरो Minsterman युवा टीममा प्रवेश गरे।
दुःखको कुरा, बेन गोडफ्रेको शुरुआती क्यारियरका दिनहरूमा धेरै उतार-चढाव थिए। सर्वप्रथम, उनले आफ्नी आमा र बुबालाई उजुरी गरे कि कसरी योर्क शहरको सिस्टम उनको लागि अनुकूल थिएन। त्यसो भए, उनको बुबाले उनलाई २०११ को अन्त्यतिर मिडल्सबरोमा सामेल हुनको लागि गम्भीर तनावबाट गुज्रनुपर्‍यो।
बेन Godfrey जीवनी - फेम कहानी कहानी:
धेरै समय नबित्दै उनकी आमाले उनीहरूको छोराले अन्य टिमसँग केही ट्रायल लिन सुझाव दिए। उनको सुझावलाई सहमति जनाउँदै डिफेन्डरको बुबाले उनलाई बुधबार दुबै लिड्स युनाइटेड र शेफिल्डमा टेस्ट गराउनुभयो।
दुर्भाग्यवस, Godfrey दुबै क्लबले अस्वीकार गर्यो जब उहाँ केवल १ years वर्षको हुनुहुन्थ्यो। सम्पूर्ण परीक्षाले उनलाई भाँच्यो र उसलाई लगभग फुटबलमा हार मान्यो। यद्यपि, फुटबलमा राम्रो भविष्यको लागि उनको आशा जीवनमा आयो किनकि उसले युरोपको १-टोलीमा सम्मिलित हुन छात्रवृत्ति पाएको थियो।
युवा टकलरसँग उच्च आशा थियो जुन उनी १ 15 वर्षको भएदेखि फुटबलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेछन्।
बेन Godfrey बायो - ठूलो सफलता कहानी:
१ t बर्षे पेसालगको पदार्पण गरेपछि यो टेक्लर यर्कको अण्डर १ captain कप्तान बन्न धेरै समय लागेन। कुनै पनि समय नबित्दै बेन गोडफ्रेको परिवारले नर्विच शहरको परीक्षा पार गर्दा उनीहरूको ठूलो सफलताको उत्सव मनाए। - २०१ 18 मा अल्फा-वर्ष अनुबंध। क्यानरीहरूसँग, हाम्रो केटाले टोलीलाई EFL च्याम्पियनशिप ट्रफी जित्न मद्दत गर्‍यो।
उसको अभिव्यक्तिले वर्णन गर्दछ कि ऊ कति खुशी थियो जब उसले आफ्नो टीमलाई च्याम्पियनशिप उकास्न मद्दत गर्‍यो।
जब उहाँ क्यानरीहरूका लागि चित्रित हुनुभयो, डिफेन्डरसँग लिग वनमा श्रीसबरी टाउनसँग एक बर्षको loanण जादू थियो। केन्द्रीय डिफेन्डरको रूपमा आफ्नो विशेषज्ञताको साथ, गोडफ्रेले एभर्टनको कोचको ध्यान आकर्षण गरे, कार्लो एसेस्टीटी.
दिलचस्प छ, एन्लोलोटीले नक्कल शहरलाई सम्पर्क गर्‍यो ट्याकरको सम्भावित स्थानान्तरणको बारेमा। भाग्यको रूपमा, बेन गोडफ्रेले २०२० मा एभर्टनसँग २£ मिलियन डलरको सम्झौतामा मोहर लगाए। त्यहाँ उनले ठूलो साझेदारी बनाए माइकल केईन - अर्को छिटो बढ्दो प्रतिभा। बाँकी उनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
उनको एभर्टनको कदमले उसको क्यारियरको जीवनलाई हलुका बनायो।
बेन Godfrey प्रेमिका र पत्नी हुन:
त्यहाँ धेरै प्रशंसकहरू छन् जसले सहमत गर्छन् कि केन्द्रीय डिफेन्डर यति सफलता प्राप्त गरे पछि अविवाहित हुनु हुँदैन। बेनको सुन्दर देखिन्छ कि आफ्नो खेल को शैली संग युहन्नाहरु लाई आकर्षित गर्ने जो महिलाहरु लाई आफुहरु लाई पत्नी सामग्रीको रूपमा हेर्ने छन् भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्ने कुनै तथ्य छैन।
पक्कै पनि, एक समय आउँनेछ जब उसले सोशल मिडियामा आफ्नो वाग् फुलाउँछ।
Lifebogger मा, हामी विश्वास गर्छौं (उच्च सामर्थ्यमा) कि बेन गोडफ्रेको जीवनमा पहिले नै एक महिला रहेको छ तर सही समयको लागि प्रतिक्षा गर्दैछ कि उहाँ अनावरण गर्न सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, हामी पक्का छौं कि उसले चाँडै (वा पहिले नै) आफ्नी प्रेमिकालाई आफ्ना बाबुआमालाई चिनिने छ र उसले उनीहरूको आशिष्को लागि कुनै टाढा समय मा खोज्यो।
बेन Godfrey व्यक्तिगत जीवन:
योर्कशायरले जन्मेका फुटबलरलाई के बाक्लो बनाउँछ? सबैभन्दा पहिला, उसले मकर राशिको गुणको मिश्रण पायो। स्पष्ट रूपमा, गोडफ्रे बुद्धिमान्, अनुशासित र न्यायिक मार्गमा पनि वफादार छन्। उसको नम्रता उसको प्रतिष्ठा भन्दा पहिले हो।
अवश्य पनि, उहाँ एक हुनुहुन्छ प्रशंसकहरू मनपर्दछ किनकि उसको व्यक्तित्वको कारण र पिचमा छ। कुनै समय गोडफ्रे वरपरको स्फूर्तिदायी हावाको आनन्द लिन सजावटी दृश्यहरूमा बसेका थिए। रेकर्ड को लागी, उहाँ एक प्यारो मुस्कान पाउनु भयो।
निस्सन्देह, उनीसँग एक सुन्दर मुस्कान छ। ऊ यति सुन्दर ठाउँमा बसिरहेको उसको दिमागमा के चलिरहेको होला?
एभर्टनको २०२१ पेरोलको विश्लेषणले बेन गोडफ्रेले थोरै कम कमाएको कुरा देखायो Theo Walcott। उनको वार्षिक salary million मिलियन तलब (जनवरी २०२१ तथ्या .्क) को साथ, प्रशंसनीय टकलर एक विलासी जीवनशैली बिताउँछ।
ऊसँग एक सुन्दर हवेली र केही विदेशी कारहरू छन्। साथै, एक फुटबल स्टार को रूप मा आफ्नो सबै वर्षको अनुभव संग, हामी बेन Godfrey नेट वर्थ फेब्रुअरी २०२० को लगभग ££ लाख को अनुमान छ।
उसको निवासको उत्कृष्ट आन्तरिक डिजाइनको झलक। यो हेर्न एकदम विलासिता हो।
बेन गोडफ्रे परिवार:
शक्तिशाली खेलाडीलाई, परिवारमा घर जाँदा र उनको आमाको राम्रो पुरानो खाना खानु भन्दा राम्रो केही छैन। गोडफ्रेले आफ्ना आमाबुबासँग बिताएको सम्झना र समयको कदर गर्दछन्। यस सेक्सनमा हामी तपाईको घरको प्रत्येक सदस्यको बारेमा विवरण ल्याउँदछौं।
बेन गोडफ्रेको बुबाको बारेमा:
कुनै श doubts्का छैन, उसको बुबाले उनलाई सबैभन्दा ठूलो उपहार दिनुभयो जुन उहाँमाथि विश्वास गरेर गर्नुभयो। केन्द्रमा फिर्ता बुबा अलेक्स Godfrey, पूर्व रग्बी खेलाडी जसको छोराले परिवारको खेल सपनाहरु लाई बाँच्न को लागी गरीएको छ। जब गोडफ्रेको स्टारडमको लागि यात्रा एकदमै गाह्रो भयो, तब उनले अलेक्सलाई उनको खोजीमा राखे।
एलेक्स गोडफ्रेलाई भेट्नुहोस्, उहाँ बेनका बुबा हुनुहुन्छ। ऊ कति जवान देखिन्छ हेर्नुहोस्। अब तिनीहरूको उमेर के फरक हुन सक्छ?
बेन गोडफ्रेकी आमाको बारेमा:
त्यहाँ कुनै शब्द छैन कि त्यो सशर्त प्रेमको परिभाषा गर्न सक्दछ कि उसकी आमाले उसलाई साना देखि सानो बच्चा थियो। आश्चर्यजनक कुरा के हो भने, गोडफ्रेले कुनै पनि अन्तर्वार्तामा आफ्नो आमाको नाम उल्लेख गरेका छैनन्। यद्यपि उनको प्रोत्साहनका शब्दहरूले उनलाई कठिन समयमा पार गरेको छ। हामीलाई शंका छ बेन गोडफ्रेको आमाले सेतो जातको सम्भावना राख्नुहुन्छ।
हुनसक्छ उनी बेन गोडफ्रेकी आमा छिन् जसले आफ्नो स्टारडमको ज्योतिमा पाइला टेकेको छैन।
बेन गोडफ्रेका भाई बहिनीहरूको बारेमा:
जब म यो बायो लेख्छु, उसको दाजुभाइ वा दिदीबहिनीलाई सting्केत गर्ने कुनै पनि जानकारी छैन। यस्तो देखिन्छ बेन Godfrey कुनै भाई बहन छ। यद्यपि उसले एक टन मित्र बनाएको छ जसलाई उसले आफ्ना भाइहरू ठानेको छ।
बेन गोडफ्रेका आफन्तहरूका बारे:
आफ्नो पुर्खा मा बढ्दै, आफ्नो हजुरबुबा र हजुरआमा को बारे मा कुनै जानकारी छैन। हो, फुटबलको उग्र संसारमा उसको सम्पूर्ण परिवारले उनको सफलतालाई मनाउँछन्। तैपनि, आफ्ना काका, काकी र टाढाका आफन्तहरूको बारेमा केही भनिएको छैन।
बेन गोडफ्रे अनटोल्ड तथ्यहरू:
ट्याकलरको जीवनी समेट्न, यहाँ उहाँको बारेमा केहि तथ्यहरू छन् जुन तपाईंलाई उहाँको जीवन कहानीको पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
तथ्य # १: नाम गलत धारणा:
एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्यलाई स्पष्ट पार्न उहाँ यससँग सम्बन्धित हुनुहुन्न ब्रिटिश सुपरबाइक स्टार (बेन गोडफ्रे) जो दुर्घटनामा मरे। जब पनि उसको नाम उल्लेख गरिएको छ, त्यहाँ प्रशंसकहरू छन् जसले उसलाई मोटरसाइक प्रोको आफन्त हुन गल्ती गरे जो डोनिंग्टन पार्कमा दुर्घटना पछि २ 25 वर्षको उमेरमा मरे।
स्पष्ट रूपमा, तिनीहरू उही नाम बोक्छन्, तर उनीहरू शानदार प्रतिभा सहित दुबै भिन्न व्यक्तित्व हुन्। RIP बेन Godfrey (आर)।
जब उहाँ नर्विचको लागि ध्यान दिँदै हुनुहुन्थ्यो, डिफेन्डर प्रायः home 489,000 ,4, ००० सम्म वार्षिक वार्षिक तलब लिन्छ। यद्यपि, टोफिससँगको उनको सम्झौताले २० earn१ सम्ममा उनको आम्दानी लगभग £ मिलियन डलरमा परिवर्तन गर्‍यो। त्यसकारण हामी तपाईंलाई यो जीवन कहानी लेख्ने क्रममा उनको बेन गोडफ्रेको तलबको ब्रेकडाउनका साथ प्रस्तुत गर्दछौं।
प्रति वर्ष: £ 4,000,000
प्रति महिना: £ 333,333
प्रति हप्ता: £ 76,805
प्रति दिन: £ 10,972
प्रति घण्टा: £ 457
प्रति मिनेट: £ 7.6
प्रति सेकेन्ड: £ 0.13
अनुसन्धानले देखाउँदछ कि औसत अंग्रेजी व्यक्तिले साढे १० वर्ष काम गर्नुपर्नेछ गोडफ्रेले एक महिनामा कमाएको पैसा कमाउन। अन्तमा, हामीले रणनीतिक रूपमा उसको तलबको विश्लेषणलाई घडीको टिकटको रूपमा राख्यौं।
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो बेन गोडफ्रेको बायो, यो उसले एभर्टनसँग कमाएको हो।
तथ्य # १: उसले टोफिजलाई किन छनौट गर्‍यो:
जोडिए पछि मेसन होलगेट एभर्टनमा गोडफ्रेले एक जना मानिसबारे खुलासा गरे जसले उसलाई यस्तो महान् निर्णय लिन मद्दत गरेको छ। HITC अनुसार, एभर्टनको शब्दहरू टम डेभिस बेनले टोफमेनमा सामेल हुने ठूलो कदम चालेको सबैभन्दा ठूलो प्रोत्साहन थियो। अन्तर्वार्तामा गोडफ्रेले एक पटक भनेका थिए;
“जब टोफिसको बारेमा मैले फुलाएको सुने मैले त्यसो गरें। तत्कालै, मैले उत्साह प्राप्त गरे कि डेभिसलाई यहाँ आफ्नो फुटबल रमाईलो छ। साथै, उनले बसोबास गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मलाई पनि महसुस गराए। ”
तथ्य # १: बेन गोडफ्रेको ट्याटूहरू:
हो! बेन Godfrey पनि inking मा ठूलो छ। स्पष्ट रूपमा, उसलाई आफ्नो बुबा र आमाको अनुमोदन आवश्यक पर्दैन उसले आफ्नो छालालाई सुन्दर डिजाइनमा टाटु बनाउनु भन्दा पहिले उसले आफ्नो जीवनको इतिहासको बारेमा बताउँछ।
उसको पाखुरामा उसको ग्लैमरस ट्याटू हेर्नुहोस्। यो प्यारा लाग्दैन?
यद्यपि उसको रेटिंग्स भन्दा त्यो भन्दा ठूलो सम्भावना देखाउँदछ Emile स्मिथ जसको फिफा धेरै owणी छ। तपाईं दुबै युवाहरु अझै पनी लामो यात्रा को लागी छ। आफ्नो फिफा तथ्या From्कबाट, उसले आफ्नो बल कन्ट्रोलमा काम गर्नुपर्दछ, पिचमा अधिक प्रभावशाली हुनको लागि स्थिति र आक्रमण फ्लेयर।
ऊसँग एउटा आशाजनक सम्भावना छ। उसले गर्नुपर्ने सबै कडा परिश्रम गर्नु र आफ्ना क्षमताहरूमा सुधार गर्नु हो।
कहिलेकाँही हामी तल झर्दै जान्छौं भन्दा पहिले कहिल्यै माथि थियौं। किनभने गोडफ्रेले यस तथ्यलाई बुझेका थिए कि विभिन्न क्लबहरूले उनलाई अस्वीकार गर्दा उसले आफ्नो सपना त्यागेन।
उसको क्यारियरको निर्णयमा भरोसा राखेकोमा हामी उसको बुबाआमा (विशेष गरी उनका खेल मायालु बुबा एलेक्स) लाई बधाई दिन चाहन्छौं। वास्तवमा, गोडफ्रे खेल्ने फुटबललाई अनुमति दिने तिनीहरूको संकल्पले उनीहरूको सम्पूर्ण परिवारलाई गर्व बनाइसकेको छ।
Lifebogger बेन Godfrey को जीवनी बनाउँदा निष्पक्षता र सटीकता को लागी प्रयास गर्दछ। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईं यो मेमेरको बारेमा केही मनपर्दैन भनेर देख्नुहुन्छ। थप, एक टिप्पणी दिनुहोस् तपाईलाई भविष्यका थ्री लायन्स ताराको बारेमा के सोच्दछ हामीलाई थाहा दिनुहोस्। उसको बायोको द्रुत सारांश प्राप्त गर्न, हाम्रो विकी तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।
पुरा नाम: बेन्जामिन म्याथ्यू गोडफ्रे
जन्मस्थान: जनवरी १ 15 1998। को १th औं
पिता: एलेक्स Godfrey